कृषि र सहकारी मूल आधार « लुम्बिनी सञ्चार
प्रकाशित मिति : 21 April, 2022 1:10 pm
सोमत घिमिरे ।
मूूल प्रश्न फेरि पनि के हो भने उत्पादन नै छैन । उत्पादन भइहाल्यो भने बजारको रमिता यस्तो छ । किसान एक्लैले बजारसँग भिड्नै सक्दैन । किसानको काम मुख्यतयाः उत्पादन हो । बजार उसको पहुँचको विषय होइन, तर अहिले किसान बजारबाट धेरै थिचिएको छ, मिचिएको छ । त्यसैले उत्पादनमा ऊ सशक्त छैन ।
सैद्धान्तिक रूपमा अब प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कृषि उपजको बजारीकरणको जिम्मा निजी क्षेत्रको मात्रै हो ? राज्यको भूमिका के हुन्छ ? राज्यले बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यदि उत्पादन र बजारीकरणमा सहजीकरण नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा नै विघटनमा पुग्नसक्छ।
एक ढंगले सहकारीकै पुनर्संरचनामा पनि जरुरी छ । सहकारीकै लागि पनि नयाँ मान्यता स्थापित गर्ने बेला आइसकेको छ । बजारीकण सहकारीका लागि निश्चित क्षेत्रका आधारमा घरधुरी तोकिदिने । ती घरधुरीले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू सहकारीले सजिलोसँग किनिदिने माध्यम बनाउने हो भने किसानलाई सजिलो हुन्छ ।
सहकारीको दैलासम्म किसान बेच्न आउन नपरोस्, किसानको दैलासम्म सहकारी पुगोस् । जे छ उत्पादन त्यो किनोस् र आफूले बजारीकरण गरोस्।